Givenchy Brand ရဲ့ Founder ကွယ်လွန် R.I.P Hubert de Givenchy – FemaleWear.net
ပြင်သစ်နာမည်ကြီး Fashion Designer တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Hubert de Givenchy အသက် ၉၁ နှစ် ရှိပြီဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် March လ ၁၀ ရက်နေ့ မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ Givenchy brand ကတော့ ၆၆ နှစ်ကြာရပ်တည်ခဲ့တဲ့ Fashion brand တစ်ခုဖြစ်ပြီး ပြင်သစ် luxury brand တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Givenchy ဟာဆိုရင် Paris ဒီဇိုင်နာတော်တော်များများကို အထူးလေ့ကျင်သင်ကြားမွေးထုတ်ပေးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Christian Dior နဲ့ Yves Saint Lauren တို့လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy နဲ့ Princess Grace of Monaco တို့ကတော့ Givenchy ရဲ့ အဓိက client တွေဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးကတော့ ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ Fashion လောကအတွက် အကြီးမားဆုံး ဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး social media စာမျက်နှာတွေထက်မှတော့ ဝမ်းနည်းပူဆွေမှုတွေများစွာနဲ့ ဆုတောင်းစကားတွေကို ဝေဆာနေကြပါတယ်။
#Givenchy no more. #AudreyHepburn ‘s black dress in #BreakfastatTiffanys is iconic #fashion that’ll never go out out of #style! #littleblackdress #lbd #fashionicon #RIPGivenchy https://t.co/nVEdG6LD7U
— sreeparna sengupta (@sreeparnas) March 12, 2018
Rest In Peace #Givenchy
— worthington c. (@WorthngtnC) March 12, 2018
နာမည်ကြီး Celebrity တော်တော်များများရဲ့ dress တွေကို ဖန်တီးတီထွင်သူ Givenchy ရဲ့ Artistic Director ဖြစ်တဲ့ Clare Waight Keller ကလည်း သူ့ရဲ့ Instagram ထက်မှာ အတော်လေးဝမ်းနည်းပူဆွေးနေတာကို မြင်တွေ့ရပါတယ်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပါ အသက် ၉၁နှစ် ထိအသက်ရှင်နေထိုင်ရတဲ့ ကုသိုလ်က လူတိုင်းမရနိုင်လို့ သက်တမ်းစေ့နေသွားနိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုလို့ရပါတယ်။ Hubert de Givenchy တစ်ယောက် ကောင်းရာဘုံဘဝမှာ အေးချမ်းစွာအနားယူနိုင်ပါစေ R.I.P Hubert de Givenchy
Tags: Givenchy, R.I.P
Selena Gomez x Coach ရဲ့ Collection အသစ်မှာ ဘာတွေပါဝင်ဦးမှာလဲ?